What will happen in Zimbabwe after Mugabe's departure? - NewZimbabwe.com What will happen in Zimbabwe after Mugabe's departure? - NewZimbabwe.com
What will happen in Zimbabwe after Mugabe’s departure?
It seems quite likely that the Zanu PF power struggle could even turn bloody, as the stakes are high and the contenders will stop at nothing to secure keys to State House.Advertisement
Whither Zimbabwe after Mugabe? The pretenders to the throne line-up — it could all go badly, or surprise with a happy ending Zimbabwe can rise again if Mugabe, in a moment of remorse on his way out, finds it in him to put the country’s interests above his.
Muleya is editor of the Zimbabwe Independent, and Ncube executive chairman of Alpha Media and Mail & Guardian Media. This article is from the Zimbabwe Independent.